အမျိုးသားများအတွက် Elastic ခါးအိတ်ကပ်ဖဲကြိုးများဖြစ်သော Harajuku ခဲတံရင့်ရောင် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
အမျိုးသားများအတွက်သည် elastic ခါးလောက် Multi Pocket Ribbon Harajuku ခဲတံ Cargo ဘောင်းဘီ
$46.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $91.99
S / Black က M / Black က L / Black က XL / Black က
Elastic ခါးဘက်စုံစက္ကူဖဲကြိုးအမျိုးသားများအတွက် Harajuku ခဲတံ Cargo Pant - S / Black backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
၁၇၈ စင်တီမီတာ ၆၀ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီးပြီးပြည့်စုံပါတယ်
အလွန်ကောင်းမွန်သော, အပြောင်းအလဲများအတွက်အမျိုးမျိုးသောရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း, ကလေးများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား 100% အတွက်အကြံပြုထားပါသည်။
စူပါ! Запахотсутствует။ 174 နှင့်вес 54 ၏အရွယ်အစားတွင် S သည်အရွယ်အစား S သည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော်လည်းကောင်းမွန်သည်။
ဓာတ်ပုံတွေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဘောင်းဘီ။ XL မှာယူသည်။ ကျွန်မသည် ၁၈၂ စင်တီမီတာအမြင့်ရှိပြီး ၃၂-၃၄ လက်မခါးရှိသည်။ ငါကြီးမားတဲ့နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပေမယ့် XL ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ elastic တီးဝိုင်းကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းတယ်! ပုံသဏ္atာန်တွင်ပုံဖော်ထားသလောက်မခိုင်မြဲသော်လည်းနွားနို့များမှာကျုံ့သည်။